Sawiro Laga Qaaday Lammaaneyaal Ka Mid Ahaa Dadkii Sannadkan Xajayey Oo Taabtay Shucuurta Malaayiin Qof – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Maka (Geeska)- Sawirqaade Raa’id Lixyaani marna ma’ uu filayn in sawir uu ka qaaday dusha sare ee xaramka Makah uu noqon doono sawirka ugu caansan ee laga faafiyey xajikii sannadkan, barkulannada bulshada ee internet kana uu ka kasban doono shacbiyad aad u ballaadhan.
Lixyaani oo ka warramaya sawirkan yeeshay qiimaha aanu dhaadsanayn markii kamaraddiisu sida kama’a ah u qaadaysay ayaa yidhi, “Sawirkan waxa uu ahaa mid si aan ku talogal ahayn uun ay kamaraddaydu u qabatay maalintii Carafa. Waa gabadh taagan oo u taagan in ay u hadhayso saygeeda oo tukanaya, si hadhkeedu uu ugu noqdo dalaalimo in uun ka yareeya kulaylka fallaadhaha qorraxda oo maalintaas aad u badnaa. Sawirkan marka koowaad ee la arko waxa loo qaadanayaa gabadh iska taagan oo sugaysa ninkan, laakiin marka sawirka fiidyowga ah la eego ama qofka eegayaa u uu fiirsado waxa la arkayaa in ujeedada ay u taagan tahay tahay in ay u hadhayso saygeeda, waxaa la arkayaa iyada oo rukuucdiisa, iyo ka soo tooska rukuucda iyo sujuuddaba hadba u dhaqaaqaysa dhanka uu hadhkeedu ka gaadhi karo. Xarakaadka jidhkiisa ayaa ay hadba dhan u raacaysay si ay ugu hadhayso” Sawirqaadi Lixyaani waxa uu sheegay in marka hore uu ka helay sida naxariista iyo kalgacalka leh ee ay gabadhani saygeeda u sugayso, taasina ay ahayd sababta uu sawirkan u qaaday, laakiin markii isaga iyo dadkii muuqaalkani gaadhay ay u fiirsadeen la arkay in xaalku sugid qudha ka fog yahay oo ay gabadhani sida dallaayadda saygeeda ugu hadhaynayso inta uu tukanayo.